Iziko ledatha elitsha laseDenmark liya kusetyenziswa ukufudumeza izindlu | Ndisuka mac
Iziko ledatha elitsha laseDenmark liya kutshisa izindlu
Kwiminyaka embalwa, besithetha ngezicwangciso zenkampani esekwe eCupertino yokuvula iziko ledatha elitsha eDenmark, iziko ledatha, elifana nezinye izibonelelo ezifanayo, lifuna amandla amaninzi. I-Apple iza kusebenzisa amandla ahlaziyekayo ukufumana wonke umbane ukuqhuba eli ziko ledatha. Indlela enye izakuthatha ithuba lonke ubushushu obuza kukhutshwa ziiseva ukuze isetyenziselwe ukufudumeza amakhaya kwingingqi yeJutland, ingingqi ekukho kuyo eli ziko ledatha mega.
Njengoko sinokufunda kwiMacWorld, oku hayi inyathelo lokuqala buhlobo I-Apple zombini kunye nokusingqongileyo kunye noluntu lwabamelwaneUluntu oluthi, njengezinye iindawo, luhlale luneengxaki xa kufikwa kumba wokuvuma ukwenziwa kwala maziko edatha, njengoko kunjalo kwimeko ekucwangciswe iminyaka eliqela eIreland.
Iziko ledatha lommandla waseJutland lizakufumana umbane ekuvuseleleni inkunkuma yasefama kunye neemveliso zezolimo. UApple usebenza neYunivesithi yaseAarhus kwinkqubo yokuguqula inkunkuma yezolimo ukuba ibe yimethane, eya kuthi isetyenziselwe ukufumana umbane ukunika amandla iziko ledatha. Impendulo efunyenweyo iya kuvelisa isichumisi esityebileyo sezondlo esiza kuziswa yiApple kuwo onke amafama ukuba awasebenzise emasimini abo.
Eli ziko ledatha liza kuba negalelo kuqoqosho lweli lizwe Utyalo-mali lwe-950 yezigidi zeedola ekufuneka i-Apple ikwenze ukwenza iprojekthi enjalo, iprojekthi njengoko sibona iya kuba yi-100% ezinzileyo, ukufumana umbane oyimfuneko ngaphandle kokungcolisa indalo kuba besebenzisa i-100% yezixhobo eziphinda zisetyenziswe ukuze kungabikho kuxhomekeka kumalahle onwabileyo, enye yejenereyitha zombane ezingcolisa umhlaba namhlanje. .
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iziko ledatha elitsha laseDenmark liya kutshisa izindlu
Amarhe alumkisa ukuba iApple Watch Series 3 iya kuba nescreen esitsha
Umdlalo omnye kunye neeapps ezintathu simahla ixesha elilinganiselweyo